Muxuu Yuusuf Garaad ka yiri qunsuliyadaha dalka Kenya ee Kismaayo iyo Hargeysa? - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee arrimaha dibedda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa ka hadlay qunsuliyado ay dowladda Kenya qorsheyneyso inay ka furato ka furato magaalooyinka Kismaayo iyo Hargeysa ee Soomaaliya.
Caasimada Online ayaa sideeddii bishan shaacisay faahfaahin ku saabsan qorshaha Kenya ee qunsuliyadahan. Halka akhri warbixintaas.
Qoraal uu facebook soo dhigay ayuu Yuusuf Garaad ku yiri:-
“Kenya waxay Afrika iyo Asia ka fureysaa 16 Xafiis Ergo-Diblomaasiyadeed oo hor leh. Waxay isugu jiraan Safaarado midkood laga furayo caasimadda Djibouti, Qunsuliyado iyo laba xafiis oo ay ka fureyso Hargeysa iyo Kismaayo.
Xiriirka laba waddan ka dhexeeya meesha ugu horreysa ee laga akhrisan karo waa wejiga uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Safaarad sannad ku-dhowaad amaba ka badan ahayd Danjire la’aan, iyo Safaarado ku yaal caasimado muhiim ah laakiin aan xataa hal diblomaasi joogin ma ahan sida ugu qurxoon ee lagu kobciyo xiriir wax wadaqabsi oo laba dal dhex mara.”